Caawiyaha tababaraha Manchester City Mikel Arteta iyo tababaraha kooxda Faransiiska ee Nice Patrick Vieira ayaa looga digay inay qabtaan shaqada tababare ee Newcastle, waxayna taladaas ka heleen tababarihii kooxda ka tagay Rafa Benitez oo si xun loola dhaqmay.
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya in weeraryahanka reer Belgium Romelu Lukaku inuu iska diido Inter Milan oo uu sii joogo Old Trafford xilli ciyaareedka danbe.
Kooxda Bournemouth ayaa u soo bandhigtay weeraryahanka Ingariiska Callum Wilson qandaraas cusub oo shan sannadood ah iyadoo lala xiriirinayay kooxaha West Ham, Chelsea iyo Everton.
Tababare Frank Lampard ayaa heshiiskiisa Chelsea lagu daray in uu lacago gunooyin ah ku heli doono haddii uu kooxdiisa cusub ee Blues ka caawiyo u soo bixi taanka Champions League.
Arsenal ayaa qaab ceeb ah ku doonaysa in ay ku kala bixiso lacagta kala badhka ka ah qiimaha Wilfried Zaha waxayna maamulka Gunners kooxda Crystal Palace ka doonayaan in ay Zaha kaga iibiyaan 40 milyan oo ay waliba doonayaan in ay shan sanadood ku kala bixiyaan.
Barcelona ayaa rajaynaysa in ay bixiso lacagta £100 milyan ginida ah ee lagu burburin karo heshiiska gool dhaliyaha xulka qaranka Argentina iyo kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez.
Saraakiisha Barcelona ayaa la kulmay wakiilada Neymar si ay uga shaqeeyaan in uu xidiga heer caalami ee xulka Brazil uu dib ugu soo laabto Camp Nou.
Wakiilada Dejan Lovren ayaa wada xaajood la yeelanaya kooxda AC Milan iyaga oo kala hadlaya in difaaca Liverpool uu Milan ku laabto iyada oo xidiga reer Croatia uu shalay uun ku soo laabtay xarunta tababarka kooxdiisa Reds.
Difaaca Arsenal ee Carl Jenkinson ayay doonaysaa kooxda Crystal Palace iyaga oo 5 milyan oo kaliya in ay ka bixiyaan diyaar u ah si uu badal ugu noqdo Aaron Wan-Bissaka.
Arsenal ayaa isku diyaarinaysa in ay dalab £12m ka gudbiso gool dhaliyaha kooxda Hull ee Jarrod Bowen.
Kooxda St Etienne ayaa Arsenal u sheegtay in ayna kooxdeeda waajib ku ahayn in ay iibiyaan difaaca dhexe ee William Saliba oo 18 sano jir ah..
Manchester United ayaa heshiis la gaadhay kooxda Sporting Lisbon oo ay ka doonayaan saxiixa xidiga khadka dhexe ee Bruno Fernandes.